मेरो क्रियाशिलता र भूमिकालाई कम्जोर पार्न गुट परिर्वतनको हल्ला चलाइयो – उपसचिब पहाडी | News Dabali
मेरो क्रियाशिलता र भूमिकालाई कम्जोर पार्न गुट परिर्वतनको हल्ला चलाइयो – उपसचिब पहाडी
December 20, 2016 | 2:00 am
नेकपा एमाले पर्वतका उपसचिब गोबिन्द पहाडी छोटो समयमा नै पार्टीको महत्वपुर्ण पदमा पुगेर काम गर्ने जिल्ला नेतामा पर्छन । बिद्यार्थी आन्दोलनपछि सामाजिक अभियानमा लागेका पहाडी एमालेको जिल्ला राजनितीमा प्रबेश गरेको दुई कार्यकालमै पदाधिकारी बन्न सफल भए । अहिले उनले गुट परिर्वतन गरेर आगामी अधिबेशनमा अध्यक्ष पद पक्का गर्न खोजेको चर्चा चलाइएको छ। एमाले पर्वतमा देखिएको मतभेदका कारण दुई बर्ष सिथिल बनेर बसेको पार्टी संगठन क्रियाशिल हुन लागेको बेला आएको गुट परिर्वतनको चर्चा र पार्टीको अभियानका सन्र्दभमा रहेर खबर डबली साप्ताहिकका लागि दुर्गाप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी ।
पार्टीले सञ्चालन गर्न लागेको चार महिने अभियान के हो ? यसका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ की ?
यो चार महिने अभियान अन्र्तगत तीन वटा मुख्य मुद्दाहरु जनताका बिचमा लिएर जाने जमर्को गर्दैछौ । पहिलो कुरा चाँहि संबिधान निर्माणमा एमालेले खेलेको भूमिकाका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनेछौ । असोज ३ मा नै संबिधान जारी हुने अवस्था थिएन । बिभिन्न खालको देशीबिदेशीको चलखेलमा एमालेले अडान नलिएको भए त्यो संबिधान आउनेथिएन । न्युनतम सहमतिका आधारमा संबिधान जारी गर्नु ठुलो उपलब्धी हो । यसलाई जनताका बिचमा लैजान्छौ । संबिधान निर्माण भए पश्चात भारतीय नाकाबन्दीका समयमा भारतीय हस्तक्षेपलाई चिरेर केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउने काम गरेको छ । कथित मधेशबादीको आन्दोलनलाई धारशायी बनाउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने काम गरेको छ , भारतको एकाधिकारलाई तोडेर चीन संग ब्यापार सम्झौता गर्न सफल भएको छ । यो ऐतिहासिक कामलाई पनि जनताका बिचमा लानेछौ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, निती तथा कार्यक्रमहरुलाई जनस्तर सम्म लैजाने काम हुनेछन । जुन बजेटले बृद्धबृद्धा, अपांग, गाउँमा बजेट दोब्बर बनाउने देखि मुलुकको सम्बृद्धिको खाका कोर्ने काम गरेको छ । यी तीनवटै एजेण्डा लिएर यो चार महिने अभियान चलाउन थालेका हौ ।
निक्कै लामो समय देखि एमालेका गाउँ तहका कमिटीहरु चलायमान भएका छैनन, यो अभियानमा एजेण्डाहरु मात्रै बोक्नुहुन्छ की पार्टी संगठनलाई क्रियाशिल बनाउने काम पनि हुन्छ ?
यो महत्वपुर्ण प्रश्न हो । केही समय देखि पार्टी भित्रका आन्तरिक अन्तरबिरोध र ब्यबस्थापकीय कम्जोरीका कारण कमिटीहरु गतिशिल हुन नसकेको, पार्टीको काम अघि बढ्न नसकेको ठिक साँचो हो । यो अभियानमा माथि भनेका तीन वटा एजेण्डा त लैजान्छौ नै त्यसबाहेक पार्टी कमिटीका बैठक, सदस्यता नविकरण, गठन पुर्नगठनका काम पनि संगसंगै हुन्छन ।माघ २२ सम्म सबै म्याद सकिएका अधिबेशन सकेर त्यसपछि एमालेका सबै कमिटीहरु नविकरण भैसक्छन र सबै कमिटीहरु चुस्त कमिटीको क्रियाशिलतामा फागुन मसान्त सम्म यो अभियान सञ्चालन हुन्छ ।
यो चार महिने अभियान सञ्चालन गरेपछि पार्टीले हासिल गर्न खोजेको साँगठनिक उपलब्धी के हो ?
चार महिने अभियान खासमा दुई वटा उपलब्धी हासिल गर्न खोजेका छौ । पहिलो कुरा त अबधी समाप्त भएर पनि चल्न नसकेका सबै कमिटीलाई अधिबेशन गरेर क्रियाशिल बनाउने छौ। यसले गर्दा संगठन गतिशिल बन्ने छ । अर्को तर्फ पार्टी भित्रको अन्तरबिरोधलाई केही हद सम्म ब्यबस्थापन गरेका छौ र अब एकमना एकताका साथ पार्टी कामलाई अगाडी बढाउने संकल्प गरेरै पार्टीको पाँचौ जिल्ला कमिटीको बैठकपछि यो कार्ययोजना निर्माण हुन सकेको हो। हामी चाहिँ के कुरामा लागेका छौ भने स्वभाबका आधारमा , कार्यशैलीका आधारमा केही मतभिन्नता हुन सक्छन तर ती मतभिन्नताहरुले पार्टी काममा असर पु¥याउन हुन्न भन्ने कुरामा सचेत छौ । अझै पनि साना मसिना अन्तरबिरोधहरु रहन सक्छन , सबै ठाउँमा सतप्रतिशत मिल्छ भन्ने होइन तर यो अभियानले झिनामसिना अन्तरबिरोध बाहेक पार्टी काममा असर पर्ने र दुई बर्ष सम्म पार्टी चल्न नसकेको अवस्था पक्कै रहन दिदैन । यस्ता अन्तरबिरोधहरु गाउँतहका अधिबेशनमा पनि नदेखिउन, केन्द्र देखिको गुटको छाँया त्यहाँ नपरोस भनेर एकै दिन अधिबेशन गर्ने जमर्को पनि गरेका छौ । संबिधान निर्माणको काम साथ साथै जबजब एमाले सरकारमा जान्छ त्यति बेला मात्रै जनताका पक्षमा लोकप्रिय काम र बजेट आउने गरेका छन भन्ने कुरा जब जनताका बिचमा स्थापित गर्दा जनमत एमालेको पक्षमा देखिने¥याउन हुन्न भन्ने कुरामा सचेत छौ । अझै पनि साना मसिना अन्तरबिरोधहरु रहन सक्छन , सबै ठाउँमा सतप्रतिशत मिल्छ भन्ने होइन तर यो अभियानले झिनामसिना अन्तरबिरोध बाहेक पार्टी काममा असर पर्ने र दुई बर्ष सम्म पार्टी चल्न नसकेको अवस्था पक्कै रहन दिदैन । यस्ता अन्तरबिरोधहरु गाउँतहका अधिबेशनमा पनि नदेखिउन, केन्द्र देखिको गुटको छाँया त्यहाँ नपरोस भनेर एकै दिन अधिबेशन गर्ने जमर्को पनि गरेका छौ । संबिधान निर्माणको काम साथ साथै जबजब एमाले सरकारमा जान्छ त्यति बेला मात्रै जनताका पक्षमा लोकप्रिय काम र बजेट आउने गरेका छन भन्ने कुरा जब जनताका बिचमा स्थापित गर्दा जनमत एमालेको पक्षमा देखिनेछ । एमालेको झण्डा मुनि आउन स्वतन्त्र मतहरुलाई पनि आकर्षित गर्ने छ । एमालेको झण्डा मुनि आउन स्वतन्त्र मतहरुलाई पनि आकर्षित गर्ने छ । यसपछि एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र पुर्णबहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टी बनाउनेछौ । अभियान पछि एमाले जिल्लाको पहिलो शक्ति बन्ने छ र मुलुककै पहिलो पार्टी बनाउन सन्देश प्रबाह हुनेछ ।
यो चार महिने अभियानले दुई बर्षको क्षतिपुर्ती उठाउन सम्भंब छ त?
मैले भन्ने गरेको छु, कति सकिन्छ, यसलाई हामी चिरेरै जानेछौ । अहिले दुई बर्ष साँगठानिक काममा मात्रै अबरुद्ध भएका हुन । किन भन्दा पर्वत जिल्लाका बिकास निर्माण, सामाजिक अभियानहरुमा हामी कत्ति पनि पछि छैनौ र अघि नै छौ । एमालेले थुप्रै ठाउँमा एमालेको साख बचाएका छौ, एमालेका साथीहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्न सफल भएका छौ, यहाँका सामाजिक , ब्यबसायिक, पेशागत ठाउँहरुमा हाम्रा साथीहरुले कब्जा जमाएका छन , यसले गर्दा एमालेको प्रभाब जनताका बिचमा राम्रो संग पुगेको पनि छ। खैर खाली सांगठनिक काममा त अबरुद्ध भएको हो। चार महिनाको यो अभियानले दुई बर्षको क्षतिपुर्ति गर्ला वा नगर्ला तर हामी स्पातिलो बनेर संगठन तयार रहेर एक बर्ष भित्र दुई बर्षको क्षतिपुर्ती हुनेछ । यसले गर्दा एमाले अझै बलियो, सबै मोर्चामा बिजय हाँसिल गर्न सक्ने बन्ने छ। नेताहरुका सम्बन्धका आधारमा बिभाजित हुने परिस्थितिबाट पार्टी माथि उठ्ने नै छ।
तपाईले पार्टीमा गुट परिर्वतन गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आयो, खासमा कुरा के हो, तपाईले प्रष्ट पारिदिनुस न ?
नेकपा एमालेमा बिचारको कुनै गुट नै छैन । पार्टीको नबौ महाधिबेशनले एउटै बिचार, निती तथा कार्यक्रम पारित गरेकाले पार्टीमा बिचारका आधारमा बिभाजित हुनुपर्ने अबस्था छैन । नेताहरुको पुर्ब सम्बन्ध, सम्पर्कका आधारमा र स्वभाबका आधारमा समुह बन्ने कुरा चाँहि छ । म फेरी दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु की मैले कुनै गुटगत कुरामा बिश्वास गर्दिन । तर अधिबेशनका सन्र्दभमा कुनै ब्यक्ति संग , समुह संग नजिक हुने र निर्वाचनमा जाने कुरा स्वभाबिक रुपमा हुन्छ । मैले नढाँटिकन भन्नुपर्छ एमालेको आठौ जिल्ला अधिबेशनमा नेकपा(एमाले)को माधब नेपाल भनिने समुहबाट उपसचिबमा निर्वाचित भएको हुँ , यसमा दुईमत छैन तर यसको अर्थ म के कुरामा बिश्वास गर्दिन भने दिनदिनै पार्टी निर्माणका सन्र्दभमा , पार्टी कामका सन्र्दभमा गुटगत अभ्यासकै आधारमा , कुन समुहबाट निर्वाचित भैयो भनेर लाग्नु हुदैन। गएको यो दुई बर्ष हाम्रा नेता कमरेडहरु एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने समेत अवस्था थिएन त्यसलाई चिर्न र मतभेद हटाएर पार्टी काममा अघि बढ्न दुबै पक्षलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु । मैले यसरी नै खेलेको भूमिका नै कार्यकर्ताले ठिक छ भनेका छन। दुई फरक ठाउँमा उभिने नेताहरुका बिचमा बसेर सहकार्य बनाउने, समझदारी निर्माण गर्ने तथा आपसी मतभेद हटाउने भूमिकालाई नै कार्यकर्ताले रुचाएका छन। फेरी पनि अर्को अधिबशेनमा कार्यकर्ताहरुले बिभिन्न समुह बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यतिबेला स्वभाबैले एउटा समुहमा उभिनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन। तर म के कुरामा बिश्वास गर्छु भने सबै नेताहरु संग समान सम्बन्ध छ । मैले मान्नुपर्ने नेताहरुलाई समान हिसाबले आदर गर्छु । जुन हिसाबले पछिल्लो समयमा मिडीयमा कुरा आएको छ यो एमाले एकमना एकताका साथ अघि जान खोजेको बेला रोक्न सकिन्छ कि, धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ की भन्ने र एमाले भित्र रडको मच्चाएर फाइदा लिन खोज्नेले पार्टी भित्र र बाहिरबाट खेलिएको षडयन्त्र हो जस्तो लाग्छ ।
यसले तपाईलाई अबिश्वास बढाउँछ भन्ने लाग्दैन ?
मेरो भूमिका र प्रभाबलाई कम्जोर बनाएर फाइदा लिन खोज्नेहरुबाट यो कुरा बाहिर ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ । म वास्तबमै एमालेको पुर्णकालिन कार्यकर्ता भएर एमालेका हरेक मोर्चामा खटि रहेको छु, मेरो यो क्रियाशिलता र भूमिकालाई देखेर पनि यसलाई बिबादमा पार्न सकिन्छ की भनेर कुनै कोणबाट दुस्साहस भएको हुन सक्छ । म एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने कुनै समुहका कारण पार्टीमा अप्ठेरो पर्न दिन्न , म पार्टीको हरेक मोर्चामा डटेर लागेको छु । पार्टीमा गुटका कुरा छाडेर पार्टीलाई एकता बनाएरै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।